Toos : Doorashada Madaxweynaha 10aad ee Soomaaliya iyo Afar Musharax oo ku soo haray wareega 2aad – GOBOLADA.COM
May 15, 2022 May 15, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Toos : Doorashada Madaxweynaha 10aad ee Soomaaliya iyo Afar Musharax oo ku soo haray wareega 2aad
Waxaa laga gudbay wareega 1aad ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee ka socota Teendhahda Afisyoone ee magaalada Muqdisho, ayada oo loo gudbay wareegga labaad.
34 musharax ayaa doorashada Teendhada Afisiyooni ka qayb galay, waxaana ka mid ah madaxweynaha xilka haya Maxamed Cabdullaahe Farmaajo iyo madaxweynayaal hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed, madaxweynaha Puntland Saciid Deni iyo ra’iisul wasaare hore Xasan Cali Kheyre.
Sidoo kale Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo isaga ku haray wareega koowaad ayaa helay 39 cod, balse uma gudbin wareegga labaad. Waxaa jira codad badan oo gaaraya illaa 13 oo hallaabay.
Musharaxa Madaxweyne ee hela laba meelood saddex meel codadka wareegga labaad ayaa ku guuleysanaya tartanka doorashada madaxweynaha. Haddii aanay sidaas dhicin, waxaa wareegga ugu dambeeya u gudbaya labada musharax ee ugu codadka badan.
Xasan Sheekh Maxamuud oo Markii loo doortay nMadaxweynaha Soomaaliya